Fantatrao ve ny fomba ahitanao ny rohy mankany amin'ny tranonkala iray ary jereo ireny?
Backlinks dia efa tafiditra lalina ary iray amin'ireo endrika manan-danja indrindra amin'ny tetikasa feno amin'ny Search Engine Optimization (SEO). Amin'izao fotoana izao, ny fahafahana tsara indrindra ao amin'ny tranonkala dia ny hampifantoka ny sainao ao amin'ny pejinao backlink.
Nahoana ianao no tokony hahalala ny fomba fijerin'ny tranonkala? Nahoana no tokony hanamarina azy ireo foana ny famahana haingana? Satria noho ny fahazoana tombontsoa goavana ho an'ny toerana ambony ny fikarohana dia mila mihazona ny mombamomba ny backlink ho salama. Raha ny tena izy, ny mpizaka Internet sy ny tompona orinasa amin'ny aterineto dia tsy maintsy miezaka hatrany mivezivezy amina rindran-kihezana tsara mba ahafahan'izy ireo mijery ny tranonkalany miovaova amin'ny algorithm amin'ny alàlan'ny Google.
Izany no antony tokony hahafantaranao ny fomba ahitanao ny rohy mankany amin'ny tranonkala iray mba hahazoana mari-pahaizana momba ny fanamarinana amin'ny fotoana mahitsy. Amin'izany fomba izany, afaka mahazo antoka ianao fa mahomby tsara ny fandrosoana vitanao. Raha tsy manana fahaiza-manao ampy ianao ary manana traikefa azo tsapain-tanana mba hananganana profil-pahasalamana mahasalama, dia miompana amin'ny fitazonana izany amin'ny fotoana rehetra - dia eo amin'ny toerana mety ianao. Eto ambany eto dia hampiseho aminao fomba tsotra ahafahana mahita rohy mankany amin'ny tranonkala iray ary hanao fanamarinana araka ny tokony ho izy - toy ny mpivarotra manam-pahaizana manokana. Raha manao izany ianao, dia ho afaka hifantoka tsara amin'ireo singa mety tianao i Google. Mino aho fa ny fitaovana an-tserasera manaraka dia hanampy anao indrindra:
Toa mangataka ny Google mety ho anisan'ny fomba tsara indrindra hahazoana ny fomba jereo ny backlinks amin'ny tranokala - mivantana avy amin'ny fomba fijerin'ny motera. Raha ny marina, ny Google Webmaster Tools dia ny "rafitra fototra" afaka maimaim-poana mba hanampy anao hijery ny tranonkalanao sy ny rakitra ankapobeny ankapobeny. Ankoatra izany, ireo fitaovana an-tserasera ireo dia tena mahasoa ho an'ny webmasters vaovao ary ny sisa amin'ireo mpandimby tsy mahazatra ny SEO.
Ny dikan-dikan-teny grika malaza dia azo jerena amin'ny alàlana malalaka malalaka. Fa ianao kosa dia hampiseho fotsiny ireo fahafaha-manao feno amin'ny fandaharam-pampianarana tena mahavariana eo ambanin'ny drafitry ny famandrihana an-tsoratra any amin'ny toerana manodidina ny $ 150 isan-taona. Anjaranao ny manapa-kevitra - saingy hitako fa ny dikan-dikan-dahatsoratra fototra amin'ny fetran-tsasatra tsotra dia mora, mora kokoa amin'ny fiara ary mora ampiasaina. Tena mora tamiko ny nanara-maso ny rohy rehetra sy ny fandrosoana amin'ny ankapobeny - ny fanondranana ny angona rehetra izay mila fijerena bebe kokoa any Excel.
Ity fitaovana fampiasa amin'ny Internet ity kokoa, izay tian'ny mpikarakara webmasters matetika, ary koa ireo izay maniry hanana sary feno momba ny raharaham-barotra an-tserasera ry zareo. Hitako ity fitaovana ity ho ilaina ho an'ny SEO afa-tsy ny fampiroboroboana dizitaly sy ny dokam-barotra momba ny dokambarotra mba hialana amin'ny fifaninanana. Gaga aho fa ny Semalt Analyzer dia afaka manokatra ny varavarana amin'ny fanaraha-maso mivantana ny tsena ary manara-maso ny fivoaran'ny vohikalako, fa koa amin'ny toerana misy ny mpanohitra ny tsena - ireo findainy tsara indrindra mba hampiasana ny fampiasako manokana, sy ny fahitako azy ary ny fahadisoany aza miala amin'ny fahadisoana azo antoka Source .